February 25, 2020 Alinn Pya Comments Off on သင်ညအိပ်ရင် ဘယ်ဘတ်ကို စောင်းအိပ်တက်တဲ့ သူတစ်ယောက် ဆိုရင်တော့ ထီပေါက်တာထက် ပိုပြီးတန်ဖိုးရှိသွားပါပြီ
ဘာကြောင့် ဒီလိုမေးရသလဲဆိုတော့ သင်ရဲ့အိပ်စက်ပုံဟာ သင်ရဲ့စိတ်နဲ့ကိုယ် ကျန်းမာရေးအတွက် အရမ်းကိုအရေးတကြီး ပတ်သတ်နေလို့ပါပဲ။ အကယ်၍ သင်အနေနဲ့ ဘယ်ဘက်ကိုစောင်းအိပ်လေ့မရှိရင်တော့ အခုဖော်ပြသွားမယ့် အကြောင်းအရာတွေကို အဆုံးထိဖတ်ကြည့်ရင်း ဘယ်ဘက်ကိုစောင်းအိပ်ဖို့ သင်ကြိုးစားလာပါလိမ့်မယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကို ဘယ်ဘက်သို့စောင်းအိပ်ခြင်းက ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ အဆိပ်အတေက်တွေနဲ့ မလိုလားအပ်တဲ့ အခြားသောအရာဝထ္တုတွေကို ခန္ဓာကိုယ်ကနေ ဖယ်ရှားသွားအောင် ကူညီပေးနိုင်လို့ပါပဲနော် …. ။ ဒီလို ခန္ဓာကိုယ်ထဲက အညစ်အကြေးတွေသာမက ဦးနှောက်ထဲက ဓာတုအညစ်အကြေးတွေကိုလည်း ဘယ်ဘက်စောင်းအိပ်ခြင်းဖြင့် ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။သင့်ဆီမှာ နှလုံးပြသာနာရှိနေမယ်ဆိုရင် ဘယ်ဘက်ကိုစောင်းအိပ်ခြင်းက သင့်ကိုကူညီပေးနိုင်ပါတယ် […]
February 25, 2020 Alinn Pya Comments Off on ဦးဇင်းတွေ ကြွလာတာမြင်တာနဲ့ မြေပေါ်ထိုင်ချ ရှိခိုးကြတဲ့ မြို့
ခုအချိန်ထိ ရောက်ခဲ့သမျှနေရာတွေထဲမှာ မတွေ့ဖူးသေးတဲ့ အမှတ်မထင် တွေ့လိုက်ရသော တောဘုန်းကြီးကလေး အယဉ်ကျေးဆုံး ရတနာမြေ (သို့ုမဟုတ်) ဓမ္မစကူးလ်မြို့ အင်းတော်တောဘုန်းကြီးကလေးမြို့ထဲကို ဝင်လိုက်တာနှင့် ပထမဆုံးတွေ့ရတာက မြေကြီးပေါ် ကျကျနနထိုင်ပြီး ရှိခိုးကန်တော့နေကြတဲ့ ပုံရိပ်တွေပါပဲ။ခုအချိန်ထိ ရောက်ခဲ့သမျှနေရာတွေထဲမှာ မတွေ့ဖူးသေးတဲ့ အကောင်းဆုံး အလှတရားတွေ ဖြစ်ပါတယ်​တောဘုန်းကြီးကလေးတို့ ဒေသမှာငယ်စဉ်တုန်းက တွေ့ရသေးပေမယ့် ခုချိန်တော့ ပျောက်ကွယ်သလောက်နီးနီး ဖြစ်နေပါပြီ။ခုတခါ အမှတ်မထင် တွေ့လိုက်ရတော့ ရင်ထဲမှာ လှုပ်လှုပ်ခတ်ခတ်လေးဖြစ်သွားရပါတယ်။ မြေပြင်ပေါ် ပြားပြားဝပ် […]
ဦးလေး၏ ဇနီးဖြစ်သူအား ချစ်ကြိုက်မိကြောင်းပြောတဲ့ တူဖြစ်သူကို ဦးလေးက ရဲဒင်းဖြင့်ထုသတ်
February 25, 2020 Alinn Pya Comments Off on ဦးလေး၏ ဇနီးဖြစ်သူအား ချစ်ကြိုက်မိကြောင်းပြောတဲ့ တူဖြစ်သူကို ဦးလေးက ရဲဒင်းဖြင့်ထုသတ်
တိုက်ကြီးမြို့နယ်၊ ပုတ္တာအုပ်စု၊ သပြေကုန်းကျေးရွာ၌ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ရက်နေက ဦးလေးဖြစ်သူမှ တူဖြစ်သူအား ရဲဒင်းဖြင့်ခုတ်သတ်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ရန်ကုန်တိုင်း၊ တိုက်ကြီးမြို့နယ်၊ လောက်လေးချောင်း ကျေးရွာနေ တူဖြစ်သူ အောင်ဝင်းနိုင်က ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ရက် ၉နာရီအချိန်ခန့်တွင် စွယ်တော်ကန်ကျေးရွာမှ မြေအိုးမျိုးစုံနှင့် ကတက်ရွက်များယူဆောင်ကာ သပြေကုန်းကျေး ရွာရှိ ဦးလေးဖြစ်သူနေအိမ်သို့ သွားရောက်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ ဦးလေးဖြစ်သူ ဦးအေးမြင့်မှာ ၎င်း၏ဇနီးနှင့် တူဖြစ်သူ အောင်ဝင်နိုင်တို့ နှစ်ဦး၏ဆက်ဆံပုံများအား ယခင်ကတည်းက မသင်္ကာဖြစ်နေခဲ့ရာမှ ဖေဖော်ဝါရီ […]
၂၀၂၀ ခုနှစ် အတွက် ထီထိုးရန် ကောင်းသော မင်္ဂလာရက်များ (ဒါလေးကြည့်ပြီး ထီထိုးပါ)
February 25, 2020 Alinn Pya Comments Off on ၂၀၂၀ ခုနှစ် အတွက် ထီထိုးရန် ကောင်းသော မင်္ဂလာရက်များ (ဒါလေးကြည့်ပြီး ထီထိုးပါ)
၂၀၂၀ ခုနှစ် အတွက် လ အလိုက် ထီထိုးရန် ကောင်းသော မင်္ဂလာရက်များ ( ၁၃၈၁-၁၃၈၂ )ခုနှစ် ၊ 2020-ခုနှစ် အတွက် လအလိုက် ထီထိုးရန် ကောင်းသော မင်္ဂလာရက်များကိုဖော်ပြလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ… ပရိတ်သတ်အားလုံး လဲ ထီဆုကြီးတွေပေါက်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ…. ဇန်နဝါရီလ = ၂၊ ၅၊ ၇၊ ၈၊ ၁၆၊ ၁၈၊ ၂၁၊ ၂၃၊ ၂၅၊ ၂၈၊ ၃၀။ […]
အိမ်ကချုပ်ချယ်လို့ဟုဆိုကာ စာရေးပြီး ထွက်သွားတဲ့ ၁၉ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေး အမြန်ဆုံး ဆက်သွယ်ပေးပါရန် မိဘများတောင်းဆို
February 25, 2020 Alinn Pya Comments Off on အိမ်ကချုပ်ချယ်လို့ဟုဆိုကာ စာရေးပြီး ထွက်သွားတဲ့ ၁၉ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေး အမြန်ဆုံး ဆက်သွယ်ပေးပါရန် မိဘများတောင်းဆို
ဖေဖော်ဝါရီ(၂၅) AlinnMyay(အလင်းမြေ) ၁၉ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေး အိမ်ကနေထွက်သွားပြီး ပျောက်ဆုံးနေ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ (၁၇) ရပ်ကွက်၊ သံမဏိဖွံ့ဖြိုးရေး(၄)လမ်း နေ ဦးမြဆိုင် ၏ သမီးဖြစ်သူ မစုပုံချစ် အသက် (၁၉) နှစ် သည် ၁၅.၂.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် နေအိမ်မှ မိသားစုများသိစေရန် စာတစ်စောင်ရေးထားခဲ့ပြီး ထွက်သွားရာမှ ယနေ့အချိန်အထိ အဆက်အသွယ်မရပဲ ပျောက်ဆုံးနေပါသဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ နယ်မြေရဲစခန်းတွင် လူပျောက်အမှတ်စဉ် (၁၇/၂၀၂၀) ဖြင့် […]